I-China 1.6m encibilikisa umugqa wendwangu yokukhiqiza indwangu kanye nabahlinzeki | I-Hongli
* Umthamo wokukhiqiza usuka ku-1500kg, ubungako ngqo bokukhiqizwa buxhomeke kumshini we-extruder nosayizi wokuncibilikiswa komoya oncibilikisiwe.
Uhlobo Lokukhiqiza: I-Vertical Blow Downward
Ububanzi beProduct: 1600MM
Amandla we-6.Production: 1500KG / 24Hours
7.Umiselwe uMax. Ijubane: 15M / Minute
I-9.Machine Dimension (LXWXH): 14X5.5X4.5M
I-1.90 single Screw Extrusion: 1set
I-6.Net Ishaja enohlobo lwe-Hydraulic Double Pillow non-Stop
7.Electrostatic Electret yedivaysi
I-8.Servo engavuni futhi isika umshini
I-9.Roots blower ne-suction Fan system
I-10.Automatic Slitting kanye ne-Reurbing yedivaysi
11.Siemens PLC uhlelo lokulawula.
Izingxenye ze-2Free Spare: Ezinye izingxenye ze-Worn njengesixhumi, ipuleti yokushisa, njll.
* Production umthamo kusuka 150I-0kg, ubungako bokukhiqiza obuqondile buxhomeke kumshini we-extruder futhi sincibilike usayizi wokubumba okushaywa.
2. Uhlobo Lokukhiqiza: Vertical Blow Downward
4. Izinto Ezisetshenzisiwe: PP
5. Ububanzi Bomkhiqizo: 1600MM
6. Ikhono lokukhiqiza: 1500KG / 24Hours
7. Aklanywe uMax. Ijubane: 15M / Minute
8. Amandla Ephelele: 600KW
9. Ubukhulu Bomshini (LXWXH): 14X5.5X4.5M
1. I-90 Screw extrusion eyodwa: 1set
2. I-Vacuum Hopper: 1set
3. Idivaysi yangaphambi kokushisa komoya
4. I-Metering Pump
6. Ishaja yeNet nge Uhlobo Olungayeki Hydraulic Double Pillow
7. Idivaysi ye-Electrostatic Electret
8. I-Servo engavimbeli futhi isike umshini
9. Roots blower nohlelo lwabalandeli bokumunca
10. Ukuzilimaza Ngokuzenzakalelayo Nokubuyela emuva Idivayisi
11. Isistimu yokulawula ye-Nokia PLC.
1. Ukuxhaswa kwevidiyo yokufaka, nokuxhumana kwevidiyo bukhoma uma kulungiswa izimo ezinenkinga encane.
2. Izindawo Zamahala Ezingamahhala: Ezinye izingxenye zeWorn like isixhumi, ipuleti yokushisa, njll.
3. Isiqinisekiso Somshini Ophelele: unyaka owodwa